Fincila Xumura Garbummaa Bifa Qindoomina Qabuuf Abdi Kutata Diinatti Naquun Belbeluu Jalqabe « QEERROO
October 13, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Akkasuma kaawwan dantaa saba isaaniif egeree jiruu isaanii hongeessuun bakka dirqama taatetti dhimma dhuunfaa isaanii kanneen akka barnoota irraa adabamanii barnoota dhabuu, ariisaa seeraan ala mooraa Yuunibarsiitiitti irra gahu mara akeekaa qabsaa’ota kaleessaaf wareegamtoota kaleessaa galiin gahuuf obsa jabaan mooraa qabsoo Bilisummaa jabeessuu irratti fuulleffannaaf cichooman sochii jabeessanii itti fufanii yoonaan gahataniiru. Kanneen mana hidhaatti dararaamaa jiranis dirqamaaf irbuun waadaa uummataa waan irra jiruuf qabsoof gumaata kaffalamu kaffaluu irratti argamu.
Qeerroon bilisummaa oromoo kaayyoo isaa ammallee galiin gahatee hinjiru. Dirqamootaaf hojiiwwan gurguddoon isa eeggatan nii jiru. Haa ta’u malee diina uummataa Wayyaaneef boqonnaa kennuu waan hinbarbaachifneef bara eebila 11, 2014 irraa qabee walitti fuufinsaan qabsoo karaa nagaa famachuu gadjabeessee jira. Haaluma kanaan hiriira mormii guddaa bakka diinniif firrii qabsoo illee quba hinqabnetti waliif himuun sochii tasisuuf waamicha walii godheen hiriira mormii guddaa dhoosee golee Oromiyaa mara dhuunfatee jira. Sochiin ammaa sochii kaleessa taasifamaa tureen adda. Kunis bilchina siyyaasaan qaramaa deemuu Qeerroo Bilisummaa Oromoof raga guddaadha.
Hiriira gidduu kanaa qaamni dhuunfaa kamuu hinwaamne. Kan waame Qeerroo Bilisummaa Oromoo akkuma ayyaana irreechaa irratti irbuu haareffatee galeen fincila bakka bakkaa dhoosuun wayyaanee kokkee qabuu danda’eera. Haaluma kanaan Guyyaa har’aa kanas, maagaalalee hanga baadiyyaa Oromiyaatti sochiin Fincila Xumura Garbummaa haala yaadamee wixinameen adeemsifamaa jira.
Fincilli xumura garbummaa haala ajaa’ibaan jabaate itti fufe kun isa guddaaf xumuraa ta’u akka qabuus dubbatan. Fincilli kun jabaatee oromiyaa Booranaa irraa hanga Lixa Oromiyaatri diinatti lubbuu mi’eessuu jalqabe. Sochii kanaan raafama hamaa keessa diinni seenuus dubbatu. Kanumaan Boorana, Arsii, Harargee, Gujii, Shawaa fi Wallagga keessatti akkasuma Jimma aanaa Sigimoottis diddaan sirna garboonfatee jabaatee jiraachuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa ifoomsaniiru. Sochiin amma kaafame hanga Bilisummaatti jabaatee akka itti fufus dhaamsa walii dabarsan.
Warraaksi biyaalessaa fxg bifa akkaan ho’aa ta’een godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee keessatti dhohee jira.Gootowwan qeerroon bilisummaa oromoo magaalaa Naqamtee fi naannoo ishees bifa qindoomina qabuun diina isaanii wayyaanee kan ta’e balaaleffachaa jjiru.Addattimmoo warraaksi kun dhaadannoo fi wallee warraaksaan masakamuudhaan sirna wayyaanee nagaa dhorkaa akka jiru maddeen ibsanii jiru.
Guutummaan magaalaa Naqamtees tohannaa qeerroo jala galteetti.
Barattoonni mooraa yuunversiitii wallaggaas diddaa sirna wayyaaneef qaban gootowwan qeerroo Leeqaa waliin ta’uun diddaa sirna wayyaaneef qaban agarsiisaa jiran.
Poolisoonni Oromiyaas jaalalaa fi aantummaa uummata isaaniif qaban hiriira kana irratti agarsiisaa jiraachuu maddeen qeerroo leeqaa naqamtee rraa gabaasanii jiru.
Hiriiri kun kaleessa sa’a 6 irratti dhoofamuy nuuf ibsuun hanga har’aatti jabaatee ganama kanallee dhohee akka jiru dubbatu.
Guyyaa har’aa onkoloolessa 13, 2017 magaalaa Gimbii keeasatti ganama kana illee fincilli guddaan jiraachuu dubbatu, hiriirri guyyaa har’aa utuu gabaasa qindeessaa jirruy nu dhaqqabe lammeen yoo ta’u haala Hiriira Oromiyaa mara hordofnee isniin geenya.
Dhaadannoowwan jaallan dirree qabsoo WBO faarsuuf ABO faarsuunis haalaan jabaatee itti fufee jira. Gaaffiiwwan mirgaa cinatti biyyattiin mootummaa Ce’umsaa kan dhaaba ABO makate yeroo dhiyootti akka gad dhaabdus sagaleen bakka bakkaa dhagaa’aamaa ooleera. Maagaalaalee Oromiyaa, Giddu gala Oromiyaa, Baha Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi kibba lixa irraa sagaleen Qeerroo dhukaasa wayyaanee caccaluu dhageessifamaa oolee jira.
Fincila xumura garbummaa qeerroo bilisummaa oromoo waame bifa qindoomina qabuuf abdi kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe kun hanga Bilisummaaf abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa’utti, faajjiin Kenya Alabaan nuu dhaabatutti cimee akka itti fufu qabu diinnis firris akka hubatuu qabus dhaamsa taasisaa turaniiru.
Humni Waraanaa TPLF humnoota hidhatanij socho’an jajjaboon uummata Oromoo Booranaa irratti Waraana banuun Nama 4 Galafatanii 21 Madeessan
Kibba Oromiyaa Goodina Booraanaa MagaalaaMooyyalee,Aanaa Dirree Iddoo Sooddaa jedhamutti Mootummaan Waayyanee Konkolaataa saddest(8)tti Reeshinaa fi Raasasa Fe’ee osoo dhoksee deemuu sababa too’annoo Poolisii Oromiyaa jala ooleef ,Poolisii Oromiyaa fi ummata nagaa irratti Waraana humnaa ol hidhate Ooraalii lama kan Tigrootaa fi Soomaalee qofa ta’an bobbaasee namoota Afur(4) yemmuu wareeggaman baay’ee kan madeesse yemmuu ta’u Ummanni keenya gamtaan lolee ofirraa kan deebisee yemmuu ta’u lolli garuu guyyaa guutuu itti ooleera.
Mootummaa gabroomfataa wayyaneen kufuu isaa sirritti kan beekee fi duguuggaa sanyii nurratti raawwatee baduuf qophaa’aa akka jiru beekee Ummanni Oromoo lafa jiru maraa Tokkummaadhan falmachuu akka qabu irra deddebinee waamicha Oromummaa goona!
Ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee kan jiru yoo ta’u fincilli humna garboonfataaf qabnu haala diinatti yaaddoo galchuun adeemaa jira. Humnoonni hidhannoon uummata kana bulchu fedhan uummanni harkaa bahuu mirkaneeffatuun uummata Oromoo irratti balaa guddaa geessisuu itti fufan. Haaluma kanaan Boorana aanaa Dirree Sooddoo keessatti kaleessa sa’a 3 irratti uummatatti banamuun ilmaan Oromoo nagaa 4 lubbuun kan ajjeesise, yoo ta’u ilmaan Oromoo 21 irratti miidhaa hamaa geessisuu isaanii dubbatu. Kanarrattu dhaggeeffatan bilbilaan Moyyaalee irraa bilbilee yaada irraa fudheera.
Akkasuma dhaggeeffata SQBO Moyyaalee irraa gaafadhen Lola kana kan bane foolisoota akkamii akka ta’e haala kanaan naaf ibse?
Haala fincila uummataas gaafadhee deebii naa laate qaba. Isa dhaggeeffannee walitti deebina
Fincilli Xumura Garbummaa marsaa 3ffaa Qeerroo Bilisummaan dhoofame jabaatee Mootummaa garboonfataa hundeen raasaa jiraachuu dubbatan
Fincila guddaa marsaa 3ffaa waamameen Mootummaa garboonfattuu Wayyaabee irratti dhoofamu haala jabaan dhoofame Jiraachuu Qeerroon godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa irraa nuuf ibsanii jiru. Haaluma kanaan Godiinaalee Oromiyaa Boorana, Arsii, Harargee, Shawaa fi Wallagga keessatti bifa jabaan dhohee jira. Mormiin kun haala
Furmanni Barattoota Yuunibarsiitii jijjigaaf hanga laatamutti barnoota hinbarannu jechuun barattoonni Yuunibarsiitii sochii jalqaban
Barattootaa keenya bakkoota biraa irraan miidhaa hamaan gahuu waan maluuf keessattuu barattoota Yuunibarsiitii jijjigaaf balaa guddaan sodaatamaa waan jiruuf, obboloonni keenya mooraa Yuunibarsiitii jijjigaa hanga Oromiyaa keessarti ramaddii argatanitti barnoota hinbarannu jechuun fincila kaasaa jiru. Fincilli barattootaan kaafamuun furmaata ilmaan keenya Yuunibarsiitii jijjigaa barataniif laatamuu akka qabuuf dhiibbaa jabaa taasisas jedhan. Haaluma kanaan mooraa Yuunibarsiitij garaa garaa kanneen akka Jimmaa, Bule Horaa fi kkf keessatti diddaa jalqabee jiraachuu Qeerroon gabaase. Sochiin kaafame kun mooraa Yuunibarsiitii mara keessatti jabaatee cimee akka itti fufus dubbatan. Addatti Yuunibarsiitii Bule Horaa fincila jabaa gaggeessaa jiraachun gabaafame.
Fincilli hanga Bilisummaatti
« Guyyaa Har’aa Wallaggaa Horroo Guduruu Magaalaa Shaambuu Keessatti FXG Deemaa Jira.
SQ: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Onkoloolessa 13, 2017/ Gabaasa FXG »
Pingback: Fincila Xumura Garbummaa Bifa Qindoomina Qabuuf Abdi Kutata Diinatti Naquun Belbeluu Jalqabe – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA